Kuboshwe eDubai Nokugcinwa Kwezingane | Izinkampani Zomthetho eDubai
Ukuboshwa eDubai kanye Nokuboshwa Kwentsha
Yenziwe Embikweni we-UAE
IDubai ingelinye lamadolobha akade ahanjelwa kakhulu emhlabeni. Kuluhlu oluphezulu lwabahambi nabazingeli bemisebenzi ngenxa yengcebo yezwe nangenxa yokubukeka kwayo okuhle nokunethezeka. Idolobha libonisa ubuhle obungajwayelekile nobumnandi, ngisho nalabo abangakaze baye edolobheni elihle. Kuyinto elula kakhulu yamathuba angenamkhawulo ekwakhiweni nasekwakhiweni. Ubuhle obubonakalayo!
Xhumana nathi futhi singakusiza
IDubai: Idolobha eliningi elihambahamba
Kodwa-ke, ngayo yonke ubuhle bomuzi waseDubai noma i-UAE, kufanele ithole idumela eliqinile ngokulinganayo lokuhambela izivakashi noma icala elincane kakhulu.
Kuyo yonke le minyaka, inani elandayo labavakashi bakwamanye amazwe abavame ukungayazi inqubomgomo eqinile, yokungabekezeleli e-United Arab Emirates, bagcina ejele lapho betholwe bafuna noma imiphi imithetho nemithetho. Yize kungekho siqiniseko sokuthi wena noma abathandekayo bakho anikwazi ukuba yisisulu salokhu, ngasikhathi sinye, ukuthatha izinyathelo ezifanele eziqondile kuyinto enisizelayo. Awusoze wazi ukuthi kuzofika nini usizo.
Ukuhlelela Ukutholwa Kwelinye Izwe
Akumele uhlele ukuvalelwa e-UAE ngoba une-skeleton esisekelweni sakho esingavusa izinsolo ezivela kubaphathi bokufika. Mane nje ubize inqubomgomo yomshuwalense wokufika. Njengoba umshuwalense wakho wemoto ojwayelekile, umshuwalense wasekhaya, nokunye, ukuhlela noma yikuphi ukuboshwa okufika kungaba ngumshuwalense.
Ngakho-ke, kufanele uhambe kanjani ngayo yonke "into yomshuwalense wokufika?"
Yiba Nesimo Esiphuthumayo
Ngenkathi useDubai noma e-Abu Dhabi, noma yini ingahamba, okungelona iphutha lakho. Yenza uhlu lokuxhumana oluphuthumayo bese unikeza omunye umuntu ikhophi. Uhlu lwakho lokuxhumana kumele lubandakanye nommeli wakho. Futhi, umndeni wakho nabangane abaseduze kufanele babe lapho futhi kungenzeka, udokotela wakho.
Oxhumana nabo be-SIM-Gcina
Kukhona konke okungenzeka ukuthi ifoni yakho izosuswa kuwe uma nje ubanjiwe. Uma oxhumana nabo bakho begcinwe kwi-SIM yakho nakwifoni yakho, ungabahlola masinyane lapho ithuba livela.
Gcina Izimpinda Zemibhalo Yakho
Qinisekisa ukuthi unekhophi lawo wonke amadokhumenti akho. Lokhu kuzoba wusizo olukhulu kummeli wakho ekuphokopheleni inkululeko yakho nokukufakazela ukuthi awunacala njengoba kungakhokhiswa. Ngaphandle kwendaba yokuboshwa, awusoze washo ukuthi yini uMama Wendalo ekugcinele yona e-UAE.
Nikeza Ukhiye Wamagumbi Wakho Okwenza Umngane
Ezinye zezinto ezibalulekile ozidingayo uma kwenzeka kunesimo esiphuthumayo zingaba semzini wakho. Ukuvumela umngane omethembayo ukuba abe nokhiye wakho wokugcina yisinqumo esihlakaniphe kunazo zonke okufanele usenze.
Uma kwenzeka ukuthi ubhekene nemithi yanoma yiluphi uhlobo, yenza kahle ngokuthola umbiko omfushane kadokotela ngaphambi kokuya eDubai. IDubai inezinto eziningi ezivinjelwe; umuthi kadokotela wakho kungenzeka ube umugqa wakho wokuphila.
Kungcono Njalo Ukugwema Izinkinga Kunokuzilungisa Kamuva
Ngokuqinisekile ubungeke uye e-UAE, ngethemba lokuthi uzoboshwa. Uma nje unamathela ezimisweni zezwe, ukhululekile njengenyoni. Ukuvimbela ukuhlukunyezwa okungenzeka nokuvalelwa kufaka phakathi izincwadi ezinhle nomeluleki wakho wezomthetho.
Uboshwe eDubai Nokuthi kungani Udinga Ummeli ngakho
Yize kungezizo zonke izimpi zomthetho ezidinga usizo lommeli, ezimweni eziningi lapho kuhileleka impikiswano engokomthetho, njengokuthi lapho uzithola uvalelwe esikhumulweni sezindiza i-UAE, kungaba yingozi enkulu uma ufuna lokhu ngokwakho. Abameli bachitha isikhathi sabo esiningi befunda imithetho. Lesi isizathu esenza ukuthi babe umuntu wokuqala ongathembela kuye uma udinga usizo lwezomthetho.
Ngezansi Nazi ezinye zezizathu eziphambili zokuthi kungani kufanele ube nommeli wedwa uma uboshwe eDubai noma eJuvenile:
Ummeli unamakhono afanele, isipiliyoni, nolwazi lokulwela wena namalungelo akho. Bayazwisisisa ins nokuphuma komthetho. Banolwazi olwanele ukukusiza ngokuxoxisana. Ngakho-ke, abameli banakho ukuthi kudinga ini ukuthola imali engcono ongeke uthole enye indlela. Qaphela ukuthi kunezimo eziningi ezikuvumela ukuthi ufune imali engokomthetho. Lokhu kusho ukuthi ngaphandle kokuthola isivivinyo esifanele, kukhona nethuba lokuthi ungakhokhi isenti elilodwa.
Faka Ifayela Elifanele
Uma kukhulunywa ngezomthetho, kubalulekile ukufaka amaphepha afanele enkantolo. Ukulandela elinye lamadokhumenti kungafaka icala lakho engcupheni. Njengoba abameli bawufundile kabanzi umthetho, bayayazi yonke imibhalo efanele nenqubo okufanele ilandelwe ngenkathi befaka. Lokhu kusho ukuthi abameli basesimweni esihle kakhulu sokukuhambisa kumadokhumenti okufanele uwalungiselele, kanjani, nokuthi kufanele uwafake nini ukuqinisekisa ukuthi awuphuthelwa isikhathi esibekiwe. Ukwehluleka ukuhlangabezana nalezi sikhathi esibekiwe kungaphazamisa inqubo yezomthetho, icala lakho lilonke, noma lingahle lisetshenziswe kuwe.
Gwema Izingqinamba Ezingokomthetho
Abantu abamaphakathi kungenzeka ukuthi abangawazi amalungelo abo asemthethweni njengesakhamuzi futhi iqhaza labameli ukukuchazela la malungelo futhi sikusize ukuwalwela. Ukuze wazi nje, nabameli nabo baqasha abanye abameli njengabameli babo bezomthetho. Ngakho-ke, kuhlale kunconywa ukuqasha izinsizakalo zommeli, hhayi kuphela lapho uboshwe esikhumulweni sezindiza i-UAE kodwa futhi nalapho ubuyekeza izinkontileka, ukuqala ibhizinisi elisha, noma ukubhekana nezinto ezinemiphumela yezomthetho. Lokhu kungakusiza ukuthi uzisindise kunoma yiziphi izingibe zomthetho ezingagwemeka.
Sebenza nommeli Ukuqhathanisa Ummeli Womphikisi Wakho
Njengoba abameli bayadingeka emacala enkantolo, ungalindela ukuthi umphikisi wakho asebenze nommeli osebenolwazi. Impela, awufuni ukuzibandakanya nomuntu owazi kahle umthetho. Okubi kakhulu ukuthi kungenzeka uma izinto zikuhambela kabi futhi uzithola usenkantolo ngaphandle kommeli futhi ngaphandle kolwazi olungokomthetho. Uma lokhu kwenzeka, unamathuba amancane kakhulu okuphumelela empini esemthethweni.
Gxila ekuthuthukisweni nasekuphilisweni
Ezimweni lapho ukulimala kubandakanyeka empikiswaneni noma ekubandlululweni, ukusebenza nommeli kukuvumela ukuthi ugxile kwinqubo yokululama. Akukhathalekile ukuthi izinhlungu zingokwezezimali, ezingokomzwelo noma zomzimba, ukugxila ekugxiliseni nasekuqiniseni impilo yakho ejwayelekile kubalulekile.
Lezi ngezinye zezizathu eziningi zokuqasha ummeli kubalulekile lapho uboshwe eDubai noma uhlanganyela kunoma iyiphi impikiswano engokomthetho.
Zivikele, Umndeni, Abangane, Abambisene nabo